China 140gsm Hi-Weight Sublimation Paper Manufacture and Factory | Chenhao
Umbala oqaqambileyo, izinga eliphezulu lokudlulisa> 93%
I-Hi-Weight Sublimation Paper inokuhlangabezana neemfuno zendawo yokushicilela ngokugqithiseleyo, ihlala iphantsi phantsi kwe-inki ephezulu okanye imibala enzulu. I-140gsm ye-Hi-Weight Sublimation Paper ithatha imithwalo enzima kakhulu ye-inki ngelixa igcina inkcazo ephezulu kunye nokunyaniseka kombala. Ungaprinta kwaye uthumele imibala etyebileyo, enzulu kunye nesivuno esikhulu sodluliselo.
Umbala oqaqambileyo, izinga eliphezulu lokudluliselwa>93%
Ubukhali bomgca obugqwesileyo xa uprinta naxa ugqithiselwa
Ukutshintshela kuzo zonke iintlobo zemathiriyeli yepolyester (iindawo ezithambileyo neziqinileyo)
Ukufota, ukuhonjiswa kweKhaya, iMiboniso yezoRhwebo, iMiqondiso, iiBhana.
Siyimizi-mveliso ekhokelayo yokugquma yephepha le-sublimation elinamava emveliso yeminyaka elishumi, kunye nemigca emi-5 yokwambathisa ngesantya esiphezulu kunye neeseti ezingama-20 zokubuyisela umva ngokuzenzekelayo kunye noomatshini bokukrolwa kwimveliso yonke imihla. Ubunzima obusuka kwi-35gsm ukuya kwi-140gsm, ububanzi obukhulu ukuya kuthi ga kwi-320cm, ubude be-jumbo roll ukuya kuthi ga kwi-10,000m, ubungakanani besiko buyafumaneka.
Sikwanayo neseti epheleleyo yokuhlola izixhobo zokuhlola ukuqinisekisa umgangatho ukusuka kwisiseko sephepha ukuya kwimveliso yokugqibela. Umbono wethu kukubonelela abathengi kwihlabathi liphela ngelona xabiso lihle le-sublimation yephepha. Izibonelelo zethu zikumgangatho ophezulu wokuhambelana, umhla wokuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nenkonzo yesiko.Iisampulu zasimahla zikwisicelo sakho, nceda uzive ukhululekile ukwenza uMbuzo!
1. Ukugcinwa kwephepha le-sublimation yedayi : yikhusele ekukhanyeni kwelanga. Yigcine kuphela kwipakethe yokuqala phantsi kweemeko zemozulu eziqhelekileyo (23 ° C, 50% RH). Kucetyiswa ukulungelelanisa izinto kwimozulu yangaphakathi ubuncinane kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokusetyenziswa.
2. Ubomi beshelufu yephepha le-sublimtion yedayi : Imiqulu yephepha yokudlulisa i-sublimation ngokukhawuleza yi-12months. Iphepha le-tacky sublimation licetyiselwe iinyanga ezi-6-8.
3.Do uvavanyo zoba phambi kokuprinta imifanekiso, ukuqinisekisa imveliso yoshicilelo ngokutyibilikayo, akukho nkunkuma inki kunye nephepha.
Ngaphambili: Iphepha le-120gsm Hi-Weight Sublimation
Okulandelayo: 105gsm Super Dry Sublimation Paper
Iphepha le-120gsm Hi-Weight Sublimation